Ngabe ikhohlisana ihlomelene? uNcikazi we-Arrows uncoma AmaZulu - Impempe
Ngabe ikhohlisana ihlomelene? uNcikazi we-Arrows uncoma AmaZulu
Umqeqeshi weGolden Arrows coach, uMandla Ncikazi uncome omakhelwane babo eThekwini abazovovana nabo inkani emdlalweni weDStv Premiership eKings Park Stadium ngoLwesithathu ebusuku, AmaZulu FC ethi abophele izibabuli zabadlali.
UNcikazi uthi Usuthu lusayine abadlali abasezingeni eliphezulu lwabe selwengezela ngokuqasha owayeyisihlabani seBafana Bafana, uBenni McCarthy njengomqeqeshi.
UMcCarthy wethulwe ngokusemthethweni njengomqeqeshi ekuqaleni kwaleli sonto, njengothatha isikhundla kulandela ukushenxa kuka-Ayanda Dlamini. Kulindeleke abe sebhentshini loSuthu okokuqala ngoLwesithathu kusihlwa.
“Umdlalo wethu naMaZulu uzoba nzima kakhulu ngenxa yezizathu ezehlukene,” kusho uNcikazi. “Ukuthi sebeqashe uBenni McCarthy, esiwaziyo amagalelo akhe kuCape Town City (engumqeqeshi), esimaziyo eku-Orlando Pirates (esengumdlali), esimazi njengoyena mgadli obukhali kunabobonke kwabadabuka kuleli.
“Ngeke nje kube wumdlalo olula, AmaZulu asayine kahle, yiwona abematasa kunawo wonke amaqembu ngesikhathi sokusyinwa kwabadlali, balanda abadlali abanamava.
“Kodwa ke noma kunjalo, i-Arrows inendlela yayo yokwenza izinto, futhi siyayethemba. Sithembele ekuhlanganeni kweqembu. Sethembele ekuzwaneni kweqembu,” kuchaza uNcikazi.
Yize Abafana Bes’thende bagcina ukuwina mhla beshaya iSuperSport United ngo 3-1 emdlalweni wabo wokuqala kule sizini, uNcikazi unethemba lokuthi bazokuphinda lokho ngoSuthu. I-Arrows isidlale ngokulingana imidlalo emine kulandelana.
“Akukubi kakhulu. Sidlale ngokulingana emdlalweni eminingi kanti kweminye yayo ngibone sengathi sasingayiwina kodwa sahlulwa ukusebenzisa amathuba okushaya amagoli esawathola.
“Uma ngibheka indlela esizilungiselele ngayo, nginethemba elikhulu lokuthi sizowuthola umphumela omuhle uma sesibhekene naMaZulu,” kusho yena.
Previous Previous post: Usakhululekile ngomsebenzi wakhe kuChippa uSeema othi abaphathi bayameseka yize izinto zingahambi kahle
Next Next post: Kungase kucace ngazodlulela kweyandulela owamanqamu kuCurrie Cup